Kungani Ukuthengiswa Kwevidiyo Kushayela Ukuthengisa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Okthoba 18, 2013 NgoLwesithathu, Okthoba 16, 2013 Douglas Karr
Ngikholwa ukuthi kuzoba nosuku lapho iwebhusayithi evamile izoba nevidiyo ehlanganiswe ngokucophelela kuwo wonke amakhasi futhi cishe konke okushicilelwe okushicilelwe. Izindleko zokuqopha, ukushicilela nokusabalalisa okuqukethwe kwamavidiyo zehle kakhulu, zikwenze kutholakale cishe kunoma yiliphi ibhizinisi. Lokho kusho, usafuna ukujabulisa izivakashi zakho futhi uvikele umsindo we-crappy, ukuxuba, ukuqopha noma ukukhiqiza.
Ividiyo inamandla okuba ithuluzi elinamandla lezinhloso zokuthengisa ze-B2B ngenxa yekhono layo lokufundisa, ukwakha ukuthembana nokuzethemba eqenjini lakho, imikhiqizo kanye nezinsizakalo. Njengoba ukudala umgwaqo wevidiyo kungasebenza ukukhulisa imali yakho yokuthengisa.
IMultiVisionDigital iyinsizakalo Yokumakethwa Kwevidiyo eku-inthanethi eNew York City naseNew Jersey futhi inikeza izibalo ezithile ezibalulekile ngomthelela wevidiyo kucebo lakho lokumaketha le-B2B.
Tags: ukumaketha kwe-b2bUkushayela kwevidiyo kuthengisaukukhangisa kwevidiyoizibalo zokukhangisa ngevidiyo
I-Oct 20, i-2013 ku-7: i-28 PM
Sawubona Douglas. I-infographic enhle! Inkampani eyodwa eyenza imikhankaso emikhulu yevidiyo ye-B2B yiCisco. Bashicilela okuqukethwe okuningi, kufaka phakathi i-Q & As, amademo wemikhiqizo nezethulo ezenza umsebenzi omuhle wokubandakanya nokufundisa izethameli zabo ezinkingeni ezahlukahlukene.